प्रहरी कर्मचारी र तिनका सन्तानमाथी सरकारबाटै कहिले सम्म विभेद भइरहने ?-Brtnepal.com
Loading... प्रहरी कर्मचारी र तिनका सन्तानमाथी सरकारबाटै कहिले सम्म विभेद भइरहने ?
Published on October 15, 2016 at 8:58 pm
पुरस्कारले इनाम वा बक्सिस भन्ने अर्थ दिन्छ । प्राचिन ग्रीकले युद्धको जीत वा दुस्मनको हतियार हत्याएपछि लडाकुलाई बहुमूल्य सामान दिने गरेबाट पुरस्कारको थालनी भएको देखिन्छ । तर यो आधिकारिक भने होईन । यस्ता अरु इतिहास खोतल्न सकिन्छ । नेपाल मै पनि युद्धको विजयमा वा राजामहाराजालाई खुशी तुल्याएको नाममा जग्गाजमीन बक्सिस वा विर्ता दिने चलन थियो । यी र यस्तै स्वदेसी तथा विदेसी परम्पराको आधुनिक रुप नै आजको अवार्ड वा पुरस्कार हुन् खेलाडि, विद्यार्थी, कर्मचारी साहित्यकार, अन्वपेषक, वैज्ञानिक जो सुकैले जे नाममा पाउन् । पुरस्कारले व्यक्ति, समाज र संस्थाहरुलाई अनुसाशित र नियम पालक बनाइ सुन्दर सभ्यताको निर्माणमा सहयोग गर्दछ । त्यसैले पुरस्कारलाई कानुन वा नैतिकताको अर्को रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
संसारमा कुनै पनि पुरस्कारको विषय सितिमिति निर्विवाद बनेको पाइँदैन । पुरस्कार नपाउनेले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नु र पुरस्कारका लागि व्यक्ति वा संस्था छनौटमा निश्पक्ष र पारदर्सी हुन नसक्नु विवादको मुख्य कारण हुन सक्छ । यहाँ कुन पुरस्कार कति पारदर्सी वा कति विवादित भन्ने चर्चा गर्न लागिएको होईन । ६१ औँ प्रहरी दिवस र प्रहरीलाई प्रदान गरिने केही नागरिक पुरस्कारको विषयलाई उठान गर्न खोजिएको हो ।
‘इमानलाई इनाम’ हिन्दी उखानलाई आधार मान्ने हो भने पुरस्कार अधिकारको कुरा पनि हो । ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भन्ने गिता वाक्यले पनि आश नगर तर आफैँ पाउँछौ भन्ने कुरा बुझ्न निषेध गर्दैन । त्यसैले सेवाकर्मीहरु मध्ये उत्कृटलाई वार्षिक समारोहमा पुरस्कृत गरिनु पर्छ भन्ने मान्यताले नै नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई प्रहरी दिवस समारोहमा पुरस्कृत गर्दछ । यसले सकल प्रहरीलाई प्रेरित गर्दछ । र यसले नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
नागरिक सेवालाई सुगम बनाउने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ नेपाल सरकारले निजामति सेवा दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष भदौ २२ मा ४१ जना निजामति कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दछ पचास हजार देखि दुईलाख रुपैयासम्मको । यस्ता पुरस्कार सबै सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान नगरिँदा भने विभेद देखिने र पुरस्कार नपाउने संस्थाका कर्मचारीको कमजोर मनोबलका कारण नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसका साथै सबै निकायका उत्कृट मध्येबाट छनौट गरी सर्वोत्कृष्ठ राष्ट्र सेवक पुरस्कार प्रदान गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । यसो हुन सके निजामति, दुवै प्रहरी, सैनिक तथा अन्य सेवाका कर्मचारीबीचमा मात्र नभई संस्थाहरुबीच पनि उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा प्रतिष्पर्धा भई नागरिक सेवा अझ फलदायि हुन जान्छ । यो विषययमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।
जसरी कामको सर्त पुरस्कार होईन । त्यसैगरी कामको फल विभेद पनि होईन । र, सरकारको ध्यान नपुगेको कुरामा कुनै दिन ध्यान पुग्ला नै । तर खुशीको कुरा के भने प्रहरीका लागि विभिन्न संस्था वा व्यक्तिले पुरस्कार स्थापना गरिदिनु नोवेल पुरस्कारको सम्मान भन्दा कम प्रतिष्ठाको विषय होईन । सुशिल केडिया फाउण्डेसन ललीतपुरले २१ हजार राशिको ‘पूर्ण शान्ति’ पुरस्कार स्थापना गरेपछि ०५२ साल देखि नै प्रहरी दिवस समारोहमा एक जना प्रहरीलाई प्रदान गरिँदै आएको छ । यसै गरी पर्वतारोही पूर्व प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्रसिंह थापाको नाममा उहाको परिवारले स्थापना गरेको पाँचहजार पाँच सय पचपन्न रुपैयाको ‘योेगेन्द्र स्मृति साहसिक पुरस्कार’ एक जना साहसी प्रहरीलाई प्रदान गरिन्छ ।
०७१ साल देखि पूर्व क्षेत्रमा कार्यरत एक जना उत्कृष्ठ प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने गरि बिपी कोईराला विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. विक्रम गुरुङ्गले आफ्नी आमाको नाममा ‘साधना देवी प्रहरी पराक्रम पुरस्कार’ स्थापना गरेका छन् । नागरिकबाट हुने यि र यस्ता कैयन उर्जालाई हर्ने हो भने प्रहरीलाई नागरिकले सच्चा साथी ठानेको देखिन्छ । यो अवसर अन्य सरकारी निकायले पाएका छैनन् । सबैले पाउँदैनन् पनि । र विभिन्न अन्तर्रराष्ट्रिय पुरस्कारबाट समेत पुरस्कृत हुने गरेका छन् प्रहरीहरु ।
भूकम्प पछि काठमाडौ कै प्रहरी पनि पालमुनि रात कटाइरहेको समाचार आउने गर्छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने प्रहरीलाई धेरै समय बिजोगमा बस्न दिएका छैनन् नागरिकले । नेपाल प्रहरीले दुखी हुनपर्ने अवस्थाबाट नागरिकले बचाएका छन् भन्दा गर्व लाग्छ । म सानै छँदा सुनेको थिएँ झापा सुरुङ्गा प्रहरी चौकीका लागि स्थानीय गणेश पोखरेलले एक कट्ठा जग्गा दिए रे भन्ने । प्रहरी गरिब हुँदारहेछन् र दिएको होला भन्ने लाग्याथ्यो । म २३ वर्ष पुगेर जागीर खाएको १८ वर्ष पुग्यो । फलानो ठाउँमा प्रहरीका लागि फलानाले यति जग्गा दिए । फलानो गाउँमा नागरिकले प्रहरी चौकी निर्माण गरिदिए भन्ने थुप्रै समाचार पढेको छु । केही वर्ष अघिमात्र काठमाडौको कोटेस्वरमा असी लाख खर्चेर नागरिकले अढाइ तले भवन बनाइ दिए । एक जना ब्यक्तिले साँढे पन्ध्रलाख सम्म दिएको थाहा भो । ललीतपुरको इमाडोल र सातदोबाटोमा कलाकार किरण केसी आफैँ लागेर करोडौँका दुई भवन बनाएर प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरे । ‘पुषको चीसोमा बाह्बजे राति सुटिङ्गबाट घर फर्कंदा देखेँ । म न्यानोमा सुतेको बेला मेरो सुरक्षा गर्ने प्रहरीहरु तुसारो खाँदै डय्टीमा थिए । भोलिपल्ट उनीहरु सुत्ने चौकी हेरेँ । प्लाष्टिकले बारेको सीत बाहिर नजाने गाइगोठ भन्दा बेकामे थियो । त्यसैले भवन बनाएका हौँ ।’उनले भने । कोटेस्वरका अधिवक्ता विश्वम्भर कृष्ण पराजुली भन्छन् ‘हाम्रै लागि २४ घण्टा खटेको प्रहरी थाकेर आउँदा पानी नचुहिने ओछ्यान भएन भने उसको चित्त दुख्छ । त्यसैले उनीहरुका लागि राम्रो भवन बनाइदिएका हौँ ।’
प्रहरी गरिब भएर होईन कर्तब्यमा सम्पन्न भएर पो काठमाडौँ सिंहदरवारकै वरपर दर्जनौ प्रहरी कार्यालय नागरिकले बनाइदिएका छन् अन्यत्रको के कुरा । आज बुझेको छु पुरस्कारका अनेक रुपमध्ये यो पनि एक रहेछ । तर प्रहरी कर्मचारी र तिनका सन्तानले सरकारबाटै कहिले सम्म विभेद भइरहने ? सैनिक मेडिकल कलेजमा सैनिक जवान सम्मका सन्ततिले अध्ययन गर्लान् । निजामति कर्मचारीका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षाका लागि पाँच लाख रुपैया छात्रवृत्ति पाउँछन् । प्रहरीका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउने त छैन होला ? अनुसाशनको बन्धनभित्रबाट प्रहरी कर्मचारीले नबोल्लान् तर तिनका सन्तानलाई यो प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ । यी उदाहरण मात्र हुन् एउटै सरकारका फरक निकायबीच विभेदको खाडल देखिनु हुन्न ।
अन्त्यमा, देसको शान्ति सुरक्षा सबल बनाइ अपराध निमूल पार्न करोडौँका जग्गा र अफिस उपलब्ध गराउने नागरिक धन्यवादका होईन सम्मानका पात्र हुन् । त्यसको गुन तिर्न पनि नेपाल प्रहरीको व्रत केबल नागरिक सेवा हुनुपर्छ हरेक प्रहरीको मनमा । र कर्ममा झल्किनुपर्छ । प्रहरी केबल नागरिकको हो र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कुनै प्रहरीले जान अन्जान कुनै नागरिकको चित्त दुखाए व्रत तोडेकोमा पाप लाग्छ भन्ने अध्यात्मिक चेतनाको विकास हरेक प्रहरीमा हुन पर्छ, नत्र कहिल्यै नतिरिने ऋण लाग्छ प्रहरीलाई । नागरिकबाट आर्थिक लाभ लिने कुरा त कल्पना भन्दा बाहिरै रहोस् । त्यसपछि मात्र म प्रहरी हुँ भनेर परिचय दिँदा नागरिकले गर्व गर्छन् प्रहरीप्रति । प्रहरी दिवसले सबैमा यो सभ्य बिचार फलाओस् हार्दिक शुभकामना ।